जागौँ अब नयाँ पुस्ताको लागि.. « Salyan Today
विद्यमान अवस्था नेपाली जनताले यो भन्दा पनि पहिले नै भोगेका थिए र भोग्दै आएका हुन् । त्यो बेलाका नेपालीहरू राजनितिक दाउपेच के हो भन्ने कुरा न बुझे न त बुझ्ने कोशिस नै गरे । किनकी अशिक्षित वर्गहरुलाई नै राजनितिको आफ्नो ढोका खोल्न प्रयोग गरिएको थियो । ती कुराहरू सबै अवगत नै छन् । न कुनै राजनितिक दलले न त कुनै नेताले नै यसलाई प्रष्टाएको पाइन्छ ।
यदि कसैले जनतालाई विजयको जस र सर्वश नै जनताहरू, परिवर्तनको हकदार केबल नेपाली जनता हुन् भन्ने कसैले साहस गरेर भनेका ती व्यक्तित्वलाई कि त मारियो कि त उनीहरूको राजनिति नै समाप्त पारेर कुनै अध्यारो कोठामा लगेर थन्काइयो । त्यसैले त विगत्का आन्दोलनहरू केवल राजनिति गर्न र पदको लागि मात्रै हो भन्ने कुरा बारम्बार दोहोरिएको छ ।
मनमा राजनिति दाउपेच राखी बाहिरी रूपमा हामी सर्वहारा जनताको लागि लड्ने हो, जे जति हो यो सबै नेपाली जनताको हो भन्दै नेपाली सोझा जनता, जो नेताको भाषणमा सर्वहरा भन्ने शब्दले गर्दा उनीहरूले जे भन्दै गए उही गर्दै गए । यो आशामा विपन्नबाट उन्मुक्ति, शोषणबाट मुक्त, आफ्नो समाज र देश बनाउने त्यो गगनचुम्बी निस्वार्थ सपनाको लागि ।
तर आज त्यो नेपाली समाज शिक्षित भएको छ । राजनितिक दाउपेच बुझ्ने भएको छ, आफ्नो अमूल्य भोटको कति मूल्य रहेछ भन्ने बुझ्न लागेको छ । जनता त केबल राज्यको विशिष्ट पदमा बस्नको लागि नेताहरुलाई जिताएका रहेछौ, हाम्रो समस्या, त केबल उनीहरूको राजनिति गर्ने भाडो रहेछ भन्ने बझदै छन् ।
फेरि एक पटक हिजो जसरी कुनै पनि व्यवस्थाको लागि निस्वार्थ लडेका थियौँ त्यसरी नै अब एक पटक फेरि कुनै राजसंस्थाको लागि हैन जो हामीले जरैबाट उखलेर फालिसक्यौ र जसरी जनताको लागि, विधि र विधानको लागि सबै नेपालको । माग गणतन्त्र र जनमुखि संविधानको लागि, जसको लागि हामीले भौतिक रूपमा होस या मानसिक रूपमा धेरै घुमाएका छौ ।
हो त्यसको लागि र आफ्नो अमूल्य मतको लागि जसरी विगतमा कुनै पार्टीले होस वा नेताले होस हाम्रो दैनिकी जनजिवनको उत्थानको लागि भनेर बारम्बार हामीलाई धोका दिएको हो त्यसको लागि ? फेरि एक पटक राज्यसत्तामा बसि हाम्रो मतको अवमूल्य गर्ने उनीहरूको विरुद्धमा सबै नेपाली जनताहरु एकजुट हुने बेला आएको छ ।
जब सम्म हामीले दिएको मतले विजयी भई राज्य सत्तामा पुगेका जनप्रतिनिधिहरूले निस्वार्थ नेपाली जनताको हुबहु आवाज बोल्दैनन्, गलतलाई गलत र सहि लाई सहि भन्न सक्दैनन् । जुन अहिलेको परिवेशमा जुन सहि सत्तापक्षले भन्ने जब थोरै संख्यामा जबकि धेरै संख्यामा गलत भनिएको छ ।
के गलत भन्ने जनप्रतिनिधिहरू हाम्रो मतमा विजयी भएका होइनन् र ? होला नेताहरुको राजनितिक दाउपेच होला तर के न्यायलयले दिएको फैसलाबाट के सत्य हो ? के झुट हो
? भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छ र ? के न्याय दिने ठाउँ नै मरेको हो ? यदि हो भने ए नेपाली जनता हामी कहिले सम्म अन्धकारमा बस्ने ? त्यसो भए न्याय खोज्न कहाँ जाने ? कसलाई भन्ने न्याय देउ हामीलाई भनेर ? जागौं, उठौँ फेरि एक पटक देशलाई लयमा लैजान ।
विधि र विधानबाट चल्नको लागि राजनितिक पार्टी र नेताहरुलाई सिकाउन तथा हाम्रो मौलिक संस्कृति, रितिरिवाज, वर्ग, समुदायको एक मात्र भरोसा गणतन्त्र र त्यसको संरक्षक संविधानलाई चिरहरण हुनबाट बचाउन सबै जुट्नु आवश्यक छ ।
दाङ घर भएका लेखक इन्जिनियर गिरिराज पौडेल शहिद नेत्रलाल अभागि प्राविधिक शिक्षालय सल्यानमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।